Wasiirka Gaashandhigga soomaaliya oo soo gaaray Baydhabo:-(Sawiro) - Awdinle Online
Wasiirka Gaashandhigga soomaaliya oo soo gaaray Baydhabo:-(Sawiro)
March 18, 2020 (Awdinle Online) –Wasiirka Wasaaradda Gaashandhigga xukuumada fedraalka somaliya Mudane Xasan Cali iyo Wasiiru dowlaha Xafiiska Ra”iisul wasaraha somaliya, Safiirka Dowlad UK u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta soo garay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya.
Wafdiga Wasiirka Gaashandhigga xukuumada fedraalka somaliya waxaa garoonka diyaaradaha Baydhabo kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan mamulka Koofur Galbeed.
Ujeedada safarka Wasiirka Gaashandhigga Baydhabo ayaa ah siddii uu uga qeyb geli lahaa Munaasabad ay ku qalin jabineyaan Ciidamo ka tirsan Xooga Dalka Soomaaliyeed.
Taliyaha ciidanka Xoogga dalka Janaraal Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka safarkiisu uu yahay kormeerka qeybta 60-aad iyo tababar uu usoo xiri doono cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga oo tababar uu uga socday magaalada Baydhabo.
Previous articleKenya oo laga helay kiisas kale oo ku saabsan Corona
Next articleCaleemo-saarka Madaxweyna & Madaxweyne ku xigenka Galmudug oo dib loo dhigey